Rochak – Page6– सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
जब ६ वर्षीया बालिकाले यसरी मनाइन् जन्मदिन
एजेन्सी । अमेरिकाको शिकागो किन्डरकार्टनर बालिका आफ्नो जन्मदिनको पार्टी मनाउनुभन्दा बेघर मानिसलाई खुवाउन चाहन्थिन् । अरमानी क्रुज जो यसै महिनाको सुरुमा ६ वर्ष पुगिन् । उनले आफ्ना बाबुआमासँग बेघरलाई आफ्नो जन्मदिनका दिन खाना खुवाउनका लागि बाबुआमासँग निरन्तर स्वीकृति मागिरहेकी थिइन् । तर उनका बाबुआमाले भने यसलाई मजाक गरेको ठानेको उनकी आमा कलाशा क्रुजले बताइन् । […]
Posted in: International News, Jiwan saili, Rochak
दुई भन्दा बढी बच्चा हुने सरकारी जागिरमा अयोग्य !
एजेन्सी । भारतको आसाममा भारतीय जनता पार्टीले राज्यको जनसंख्या नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । मस्यौदामा दुई भन्दा बढी बच्चा भएकालाई सरकारी जागिरका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था रहेको पीटीआईले जनाएको छ । त्यतिमात्रै होइन दुई भन्दा बढी बच्चा भएकालाई स्थानीय पञ्चायत या नगर निकायको निर्वाचनमा समेत रोक लगाइने उल्लेख छ । जनसंख्या नीतिको मस्यौदा अनुसार […]
Posted in: International News, Rochak
यसकारण मैले माआेवादी केन्द्र छाडेँ !
”जिल्ला सेक्रेटरी क. इन्द्रमोहन सिग्देल हुनुहुन्थ्यो, लडाकू दस्ताको कमाण्डर म थिएँ, सहायक कमाण्डर क.गोकर्ण पण्डित । क. गोकर्ण पण्डित (थर्पु बजारका युवाहरूले राखिदिएको प्यारो नाम स् गुरिल्ला) जो शहीद हुनुभो, क .श्रीराम घिमिरे जसको आजसम्म कुनै अत्तोपत्तो छैन, क. वीरेन्द्र श्रेष्ठ, मलगायत हामी केही साथीहरू एकछिन नसुती रातभरी भित्तेलेखन गर्थ्यौं, पोस्टर टाँस्थ्यौं,पम्प्लेट छर्थ्यौ, गाउँ-बस्तीहरूमा मशाल […]
Posted in: Jiwan saili, Rochak, फ्लयास ब्याक
पृथ्वीबाटै लोप हुन लागेको आराजस्तो ३२ दाँते माछा भेटियो (फोटोफिचर)
काठमाडौं । भारतको महाराष्ट्रस्थित सिंधुदुर्ग जिल्लाको बिजयदुर्ग सामुद्रिक तटमा ३२ ओटा दाँत भएको दुर्लभ ‘आरेमाछा’ भेटिएको छ । गत सोमबार स्थानीय माछा मार्ने मछुवारहरुले जालमा अनौठो माछा देखेपछि बाहिर निकालेका थिए । करिव १६ फुट लामो सो माछा ७ सय किलो भएको र नाकबाट बाहिर काठ काट्ने आरा जस्तो धारिलो ३२ ओटा ठूला ठूला दाँत […]
Posted in: mainNews, Photo Feature, Rochak
झर्रोटर्रो : चारदलीय पञ्चायतीतन्त्र
यतिखेर नेपाल मण्डलमा चारदलीय पञ्चायती व्यवस्था चलिरहेको छ । यसलाई २१औँ शताब्दीको भाषामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि भन्ने चलन छ । २०१७ पुस १ देखि २०४६ चैत २६ सम्म निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था थियो । त्यसपछि बहुदलीय पञ्चायत लागू भयो । अहिले चारदलीय पञ्चायती व्यवस्थाको हालहुकुम चलिरहेको छ । चारतारे दल, सूर्यछाप दल, गोलघेरे दल र गाईछाप […]
Posted in: Bichar, Rochak, Sahitya
वेपत्ता अकबरलाई अजिंगरको पेट चिरेर निकालियो
एजेन्सी । इन्डोनेशियामा एउटा अजिंगरले निलेको मानिसलाई पेटबाट मृत अवस्थामा निकालिएको छ । इन्डोनेशियाको सुलाभेसी द्विपमा आइतवारदेखि वेपक्ता अकबर नामका २५ वर्षीय युवकलाई मृत अवस्थामा निकालिएको हो । सो स्थानमा एउटा बिशाल सर्प भेटिएको र त्यसको पेटमा मानिस भएको आशंकामा चिरिएको थियो । ७ मिटर लामो सर्पको पेट काटेर हेर्दा हराईरहेका ती व्यक्तिलाई फेला पारिएको […]
कवाडीमा फ्याँकेको घडीले बनायो लखपति
काम नलाग्ने भनी कवाडीमा फ्याँकेको सामानको भाउ कति आउँछ होला ? यो त भनिरहनु पर्ने कुरा होइन । तर कहिलेकाहीँ कवाडीका सामानहरु यति बहुमूल्य हुँदा रहेछन् कि त्यसले रातारात मान्छेको भाग्य नै बदलिदिने । बेलायतमा एकजना व्यक्तिलाई त्यसैगरी तालुमा आलु फलेको छ । इंगल्याण्डको चेशायरमा बस्ने एक व्यक्तिले ५ सय पाउण्डमा पनि नबिक्ने आशा गरेको […]
प्रेमिकाको कुकुरको टाउँको टोक्दा ७ वर्ष जेल
एजेन्सी । अमेरिकी राज्य प्युर्टेरिकोमा एक व्यक्तिलाई आफ्नी गर्लफ्रेन्डको कुकुरको टाउको टोकेको आरोपमा ७ वर्षको जेल सजाय तोकिएको छ । लुईस अर्रोयोलाई जनवारसँग खराब व्यवहार गरेको तथा घरेलु हिंसाको घटनामा दोषी ठहर गर्दै जेल सजाय सुनाइएको हो । लेर्श सहरमा रहेका ४० वर्षीय अर्रोयोले ४ फेब्रुअरीमा २ महिनाको बच्चा कुकुरमाथि हमला गरेका थिए भने आफ्नी […]
११ वर्षमै आमा बन्दैछिन् यी बालिका
एजेन्सी । बेलायतमा ११ वर्षकी एक बालिका छिट्टै आमा बन्दैछिन् । उनी बेलायतकी सबैभन्दा कम उमेरमा आमा बन्ने बालिका बन्दैछिन् । प्रहरीका अनुसार बच्चाका बाबु पनि बालक नै छन् र हुनेवाली आमाभन्दा केही वर्ष जेठा छन् । समाचारपत्र गार्जियनमा प्रकाशित समाचारमा कानुनी बाध्यताका कारण गर्भवतीसँग जोडिएका पहिचानलाई गोप्य राखिएको छ । एक बालिकाले १२ वर्षको […]
क्यान्सरविरुद्ध पनि फाइदाजनक गर्भनिरोधक चक्की
एक नयाँ रिसर्चमा गर्भनिरोधक चक्कीको सेवनले क्यान्सरको सम्भावना समेत समेत कम हुने पत्ता लागेको छ । बेलायतको एभरडिन युनिभरसिटीले भनेको कि गर्भनिरोधक चक्कीको नियमित सेवनबाट क्यान्सर हुने खतरा कम हुन्छ । ४० वर्षभन्दा लामो समयदेखि गरिएको रिसर्चमा वैज्ञानिकले यसको सेवनले महिलाको शरीरमा के असर पर्छ भन्ने अनुसन्धान भइरहेको छ । अनुसन्धानको परिणाममा भने यस प्रकारको […]
Posted in: Jiwan saili, Rochak, Technology